Mareeg ooheshay 54 dhibcood boqolkiiba marka aan u eegnay sagaal sifo oo hoos ku xusan | Mareeg.com somalia, World News and Opinion. Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 23 November 2020 23 November 2020
By almar Abdi marqaati987@gmail.com–Waxaan website-ka www.mareeg.com siinay 54 dhibcood boqolkiiba marka aan u eegnay sagaal sifo oo hoos ku xusan. Waxaan fariintaan idiinko soo dirnay in aad kasoo jawaabtaan haddii dood aad ka qabtiin dhibcaha idiin qoran.
Sifooyinka aan u qiimeeynay websiteyada
Qıımeeynta websıteyada waxaan u ıstıcmaalnay aalladda Marqaatı ugu talagashay ın lagu ogaado heerka la isku haleen karo wararka ay qoraan websıteyada waaweyn, waxaan dhibcooyin ku siinay sida tan:
i) Si joogto ah uma daabacaan warbixino been abuur ah 22 dhibcood
ii) Waxay soo uruuriyaan oo soo bandhigaan macluumaad si mas’uuliyadi ku jirto 18 dhibcood
iii) Waxay si joogto ah u saxaan ama u caddeeyaan qaladaadka 12.5 dhibcood
iv) Waxay kala saaraan farqiga u dhexeeya wararka xaqiiqada ku saleesan iyo ra’yiga si mas’uuliyedi ku dheehan tahay 12.5
v) Waxay ka fogaadaan cinwaannada beenta ah 10 dhibcood
vi) Website-ka wuxuu daaha ka qaadaa lahaanshaha iyo maalgelinta 7.5 dhibcood
vii) Wuxuu si cad u calaamadeeyaa xayeesiinta 7.5 dhibcood
viii) Wuxuu muujiyaa cidda mas’uulka ka ah iyo haddii ay jiraan dano isdhaafsan 5 dhibcood
ix) Maqaalka website-ka ku qoran waxaa ka muuqda qofka qorey magaciisa, waxaa kale website-ka laga helaa mesha lagala xiriiro dadka website-ka macluumadka ku qora iyo macluumaad taariikh nololeed kooda 5 dhibcood.
Si wargeysyada/Website-yada u ogaadaan qaabka dhibcooyinka loo siiyey waxaa faafaahin ka bixiney qodob walba oo kor ku xusan.
Waa in Website-yada inta karaan kooda ah ka fogaadaan faafinta warka beenta (spread of fake news). Waa in tafatiraha bogga uu xaqiijiyo wararka siyaasiga yiri in ay yihin wax saxan mase wax bulshada lagu marin habaabin rabo, kadibna uu aqristaha u cadeeyaa sida runta tahay.
Qodobka 1 In aysan si joogto ah u daabacin warar been abuur ah (22 dhibcood ).
Iyadoo la raacaayo awaamirta iyo xeerarka saxaafadeed waa in waygeysyada/website-yada ay ilaaliyaan anshaha xog uruurinta.
Qodobka 2 Macluumadka oo lagu soo aruuriyo si saxan oo mas’uulid ku jirto (18 dhibcood).
Si loo helo isku haleen fiican, waxaa muhiim ah in website-ka dib ka saxaan wararkii hore ee ay soo geliyeen oo ay dib ka ogaadeen in wararkaas ay ahaayeen been abuur. Arrintan waxaa ka mid ah hadalada laga soo xigtey qof kale oo lagu soo qorey website-ka.
Qodobka 3 Waxaa u fiirinay in ay gadaal ka saxaan hadalka ka tagey oo beenta ah (12.5 dhibcood).
Si loo helo xog ku dhisan warar muhiim u ah bulshada waa in website-ka u kala qaadan yihiin ra’yiga qof iyo wararka xaqiiqada ku dhisan. Sidaasi darteed waxaa dhibcaha ku bixiney in aqristaha u kala cadaadaan maqaalka in uu yahay ra’yi iyo in uu yahay warar qaxiixo ah.
Qodobka 4 In website ka ra’yiga iyo wararka xaqiiqada u kala saaran yihiin (12.5 dhibcood).
Saxaafadda waxaa looga baahan yahay in ee iska ilaaliyaan wararka keeni karo kicin dadweyne ama marin habaabin bulsho. Sidaasi darteed waxaa dhibcooyinka ku bixiney sida qodobka 5 ku qoran.
Qodobka 5 Ciwaanada been abuurka ah in uusan daabacin website-ka (10 dhibcood).
Sida loo helo daahfurnaan waxaa muhiim ah in website-ka/Wargeysku cadeeyaa milkiilaha leh iyo maalgashiga soo galo website-ka. Sidaasi darteed waxaa qodobka 6 u kala qaadney sida soo socoto.
Qodobka 6 In milkiilaha ku qoran yahay website-ka (4 dhibcood) iyo maalgelinta Bogga website oo muuqdo (3.5 dhibcood).
Si dadka ku xiran website-ka u kala ogaadan in nuqulka lagu soo geliyey lacag iyo inkale waxaa muhiim ah in xayeesiinta iyo nuqulada/maqaalada lacagaha lagu bixiyey ee ku cad yihiin website-ka. Sidaasi darteed waxaa qodobka hoos ku qoran ku cad sida aan dhibcaha u siinay website-ka.
Qodobka 7 Xayeesiinta in ay caddahay sida ads-ka (4 dhibcood) iyo maqaalada/xayeesiinta lacagaha laga qaadey ay cad yihiin. (3.5 dhibcood).
Sida dadka ee u ogaadan cidda mas’uulka ka ah (Agaasimaha Website-ka) iyo hadii ay danno gaar ah ka leeyihin maqaalada ee qoraan. Danahaas waxaa ka mid ah in maqaaladooda dad gaar ah ay ku taageeraan oo ay bulshada ka gadaan iyo wax la mid ah. Waxaa loo baahan yahay in website-ka ku caddahay magaca mas’uulka.
Qodobka 8 Waxaa u kala qaadnay cidda mas’uulka ka ah websiteka (3 dhibcood) iyo hadii ay jirin danno u gaar ah ee ka leeyihin maqaalada ee qoraan. (2 dhibcood).
Sida ku cad xeerarka saxaafadda, maqaalada waa in ay ka muuqdaan magaca cidda qortay si loo ogaado dadka maqaalada ka qora haddii ee qoraan hadalada aan leheen sal iyo raad iyo kuwa kale. Waxaa kaloo muhiim ah in suxufiyiinta website-ka qoro yihiin dad aanan isqarinin oo taarikh-da ee leeyihin laga heli karo website-ka.
Qodobka 9 waxaan u kala qaadney dadka maqaalka u qoro website-ka (3 dhibcood waa hadii ee yihiin 3 qof mase ka badan), ciwaan lagala xiriiro (1 dhibcood) iyo taarikh nololeedka qoraaga (1 dhibcood).